प्रधानमन्त्री मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना, ओलीलाई मिर्गौला दिने समीक्षा को हुन् ? (फोटो फिचर) – kalikadainik.com
प्रधानमन्त्री मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना, ओलीलाई मिर्गौला दिने समीक्षा को हुन् ? (फोटो फिचर)
सोमबार, फाल्गुण १९, २०७६ | १९:४७:३८ |
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गर्न सोमबार अस्पताल भर्ना भएका छन्। आगामी बुधबार उनको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने भएपछि सोमबार महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कोर्डियो तथा भास्कुलर सेन्टरमा भर्ना भएका हुन्।
अस्पताल भर्ना हुनुअघि उनले मुस्कानसहित आफ्ना सल्लाहाकार सदस्यहरुसँग विदा लिएका थिए।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भावुक भिडियो सन्देश जारी गरेका थिए।
अस्पताल भर्ना हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशवासीका नाममा सन्देश दिँदै आफू त्यसै अलप नहुने बताएका छन्।
तीन मिनेटको भिडियो सन्देश दिएका ओलीले आफूू देश र देशवासीका लागि संघर्षरत रहँदा मिर्गौला फेलयर जस्तो रोगबाट पीडित भएको बताएका छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारले मुर्छित सपनालाई ब्युँझाएको भन्दै ती सपना पूरा नगरी आफू अलप नहुने बताएका छन्।
उनले सन्देशमा आफूले पहिलो पटक २०६४ साउनमा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएको र आगामी बुधबार फेरि दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउन लागेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दिने समीक्षा को हुन् ?
काठमाडौं, १९ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही बुधबार महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदैछ । दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसपटक कसले मिर्गौला दिँदैछन् त ? सर्वश्व चासोको विषय बनेको छ ।
यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले झापाकी समीक्षा संग्रौलाले मिर्गौला दिँदैछन् । आइतबार मात्र प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका सदस्यहरूलाई मिर्गौला दाताका रूपमा समीक्षालाई चिनाएका थिए । तर, उनको नाम खुलाइएको थिएन । ३२ वर्षीया समीक्षा झापा, चारआलीकी हुन् । स्रोतका अनुसार समीक्षा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलोपटक मिर्गाैला दान दिने अञ्जान घिमिरेकी भान्जी हुन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीको पनि ‘भान्जी’ नाता पर्छिन् ।
केही समययता उनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बाक्लै आउजाउ गरिरहेकी थिइन् । आइतबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मिर्गौला दान दिने महिलाबारे जानकारी गराएका थिए । शिक्षण अस्पतालले आइतबार नै ओलीलाई मिर्गौला दिने महिलाको फाइल रेकर्डमा नाम दर्ता गरिएको छ । जसमा ‘श्रीमती समीक्षा संग्रौला ज्ञवाली (भान्जी), श्री केपी शर्मा ओली (मामा) लेखिएको छ । उक्त रेकर्ड फाइलमा समीक्षाका साथै उनका पतिको नाम र फोन नम्बर समेत लेखिएको छ । समीक्षाका दुई सन्तान रहेको स्रातको भनाइ छ । केही दिनअघि मात्र समीक्षााके पनि स्वास्थ्य जाँच गरिएको बताइएको छ ।